Laba wiil oo Soomaali ah oo lagu toogtey magaalo yar oo ku dhaw London (Sawiro) – SBC
Laba wiil oo Soomaali ah oo lagu toogtey magaalo yar oo ku dhaw London (Sawiro)
Laba wiil oo Soomaali ah oo 20 jir ka yar ayaa xaley lagu toogtey magaalada Milton Keynes oo ah magaalo yar oo 79 KM waqooyi Galbeed kaga beegan magaalada London, sidaasi waxaa xaqiijiyey Booliiska.
Kooxaha dambi baarista oo ku sugan halkii uu dilku ka dhacay
Maxamed Cabdi Faarax oo 19 sano jir ayaa isla goobta ku geeriyoodey, halka Amin Axmed Ismaacil oo degan magaalada London uu u geeriyoodey dhaawacii ka soo gaarey toogashadaasi markii la dhigay Isbitaalka Milton Keynes.
Maxamed Cabdi Faarax ayaa laga toogtey madaxa isagoo mudo ay eryanayeen dadka diley isaga iyo saaxiibkiis ilaa ay la soo gaareen halka magacabaao Fishermead council oo lagu diley.
Haween fara badan oo Soomaali ah oo isagu soo baxay goobta dilku ka dhacay
Amin ayaa isna sidoo kale madaxa lagala helay xabad, isagoo dhaawacii ka soo gaarey xabadaasi ugu geeriyoodey galabta Isbitaalka Milton Keynes.
Dilka wiilashan ayaa la sheegay in uu dhacay xaley 10-kii habeenimo, waxaana Booliisku ay wadaan baaritaan ku aadan dilkaasi, inkastoo Boolisku ay sheegeen in wiilashan ay garanayaan iyagoo ku haya dhacdooyin heerkoodu hooseeyo oo la xiriira fal dambiyeed, laakiin meesha kama aanay saarin in dhacdadan la xiriirto fal dambiyeed.
Saaka waaberigii ilaa iyo galabt waxaa meeshii dilku ka dhacay ku soo quqlulayay Soomaali badan oo ka mid ah bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaaladaasi kuwaasi oo lagu khiyaaso 10 kun.
Axmed Xasan oo adeer u ah Maxamed ayaa isagoo ka hadlaya dilka wiilka uu adeerka u yahay wuxuu yiri “Tani waa arin mashaqo ah, waxaa la ii sheegay in mudo lagu eryanayey jidka ilaa lagu diley laamiga dhiniciisa”.
Maxamed Aabihiis waxaa la sheegay in uu ku maqan yahay Soomaaliya, waxaana wiilkan la diley qoyskoodu ka soo guureen wadanka Norwayd.
Rashiid Hiirad oo ay qaraabo yihiin wiilka la dilay ayaa u sheegay telefishinka Sky News in Maxamed uu mudo todobaadyo ah ku jirey dhuumasho.
Rashiid wuxuu sheegay in dhawr jeer la garaacay, ilaa hooyadiis Faadumo Axmed ay ka guurtey magaalada Milton Keynes iyadoo u guurtey magaalada Birmingham si ay uga fogaato mushkilada wiilkeeda ku lugta leeyahay, laakiin wiilkeeda wuxuu soo booqan jiray magaalada Milton Keynes isagoo sheegay in uu ku leeyahay saaxiibo.
Maxamed ayaa la sheegay in uu magaalada Birmingham ka bilaabay College si uu ugu gudbo Jaamacad isagoo doonayey in uu barto culuunta dhaqaalaha sida ay sheegeen waalidiintiis oo SBC ay xiriir la sameysay.
Sharmaarle Maxamed oo adeer u ah Maxamed ayaa isagu mar uu ka hadlayey dilka Maxamed wuxuu yiri “Markii aan maqley in la diley, waxaan u qaatey in uu aaday Soomaaliya oo ah meel ay dagaalo ka oogan yihiin, uma haysan Milton Keynes oo ah magaalo nabadeed”. Dambi baare Rob Mason, oo ah baaraha dambiyada ee Thames Valley Police, ayaa yiri “Xaqiiqdii waxaanu joognaa bilowga baaritaanka shilkan, waxaana wadnaa baaritaan, waxaan haynaa dadka wax ku noqdey dhacdadan inay yihiin saaxiibo laakiin kuwa wax geystey wali ma ogin waxa ay yihiin”.
Sababaha dilkan ayaan ilaa iyo haatan laga bixin faahfaahin dheeraad ah, waxaase jira shakiyo la xiriiro ku aadan in uu la xiriiro falal dhalinyarada hubaysan, ee Gangs-ka ah, ganacsi daroogo & waliba midabtarkoor.
Haweenay cadaan ah oo degan Amin Milton Keynes oo codsatey inaan magaceeda la sheegay oo ka hadlaysay diulkan ayaa tiri “Wuxuu noqon karaa mid la xiriira daroogo, Gangs, ama isir”.
Milton Keynes oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhaw 200 kun oo qof waxaa ka mid ah bulshada ku nool dad u dhashay wadamada Yurubta Bari oo u badan Poland, Soomaali, Eritreyiaan, Kenyaati & Ghana.